Siduu Mulkiilaha Chelsea Ee Roman Abramovich Uu Ku Qabsaday Kubbada Cagta England? Iyo Blues Oo Noqotay Kooxda Caasimada London La Wareegtay. - Wargane News
Home Sports Siduu Mulkiilaha Chelsea Ee Roman Abramovich Uu Ku Qabsaday Kubbada Cagta England?...
Siduu Mulkiilaha Chelsea Ee Roman Abramovich Uu Ku Qabsaday Kubbada Cagta England? Iyo Blues Oo Noqotay Kooxda Caasimada London La Wareegtay.
Tan iyo markii uu mulkiilaha Ruushka ah ee Roman Abramovich uu la wareegay shaqada Stamford Bridge ee Chelsea waxa uu sameeyay horumar kubbada cagta ah oo waqti dheer lagu samayn lahaa. Waxa uu la wareegay Chelsea oo aan aduunka ka ahayn koox la ixtiraamo isla markaana aan lahayn taariikhda layaabka leh ee ay maanta yeelatay. Waxa uu Abramovich u huray lacag waali ah oo uu jeebkiisa kaga maal galiyay Blues si uu uga dhigo kooxda ay maanta tahay.
Waa shaki la’aan in Abramovich uu Chelsea ka dhigay koox awood badan ku leh kubbada cagta dhaqaale ahaan iyo xifrad ahaanba, laakiin shabakada Gool24.net ayaa jamaahiirta Chelsea maqaalkan kula wadaagaysa farxada ay ku jiraan si aanu u soo bandhigno sida uu Abramovich kooxdan uga dhigay mid la wareegtay guulihii England isla marakana dhakada ka qabsatay kooxihii ree London oo ay markii hore Arsenal ahayd kooxda ka talin jirtay.
Haddii xaqiiqda la eego markii uu aanu Abramovich la wareegin Chelsea waxay ahayd koox ka mid ah kooxaha heerka dhexe oo aan lagu tilmaami karin koox wayn inkasta oo ay dadaal wayn samaynaysay, laakiin haddii aan ka soo bilawno waqtigii uu Abramovich la wareegay Chelsea ayaa ah boqorada England iyo kooxda sida rasmiga ah u soo qabsatay caasimada London.
Maqaalkani ma noqon doono mid hadal kaliya ah waxa uu noqon doonaa mid aanu ku cadayno xogta kooxaha England ee koobabkii ay waqtigan ku soo guulaysteen iyo kooxaha waa wayni sida ay uga danbeeyaan Chelsea iyada oo waliba ay muuqato in uu bilawday dabka uu hadda shiday Antonio Conte.
Bishii June 2003 kii ayuu Abramovich la wareegay Chelsea iyada oo mulkiilihii hore ee Ken Bates uu isna iibsaday kooxda Leeds United. Xili ciyaareedkii ugu horeeyay ee uu Abramovich hayay mulkiyada Chelsea waxay ku dhamaysatay kaalinta labaad ee horyaalka Premier Leaque-ga halka xili ciyaareedkii ka sii horeeyay ay kaalinta afraad ku dhamaysatay waxayna sidoo kale soo gaadhay afar dhamaadka Champions Leaque-ga.
Abramovich ayaa markaas sameeyay maalgalin cajiib ah wuxuuna dhisay xarunta tababarka Chelsea ee ay ilaa hadda ku shaqayso ee Cobham wuxuuna kooxda ku soo daray saxiixyo si wayn sarre ugu soo qaaday. Laga soo bilaabo markaas ilaa hadda waxay Chelsea si rasmi ah u noqotay kooxda ugu guulaha Badan England!!.
Chelsea waayihii mulkiilanimo ee Abramovich ku soo guulaystay 14 koob waxaana ku soo xigta Manchester United oo isla waqtiga ku soo guulaystay 12 koob halka Manchester City ay kaalinta saddexaad ugu jirto 5 koob waxaana kaalinta afraad ku haysata Arsenal oo afar koob leh, waxaana lays waydiin karaa Arsenal iyo kaalinta afraad maxaa kala haysta, halka Liverpool ay kaalinta shanaad ugu jirto 3 koob oo ay ku soo guulaystay muddadii uu Abramovich mulkiyada Chelsea haystay.
Haddaba aan hoos ugu sii degno xogta ay shabakada Gool24.net idiinka diyaarisay guulaha uu Abramovich ku hogaamiyay Chelsea waqtigii uu haystay. Chelsea iyo Manchester United ayaa waqtigan ku soo guulaystay min 4 koob oo Premier Leaque-ga ah, laakiin saddexdii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay oo ayna Man United hal koob oo PL ah ku soo guulaystay ayay Chelsea laba jeer soo hanatay.
Manchester City ayaa ah kooxda labaad ee Chelsea iyo Man United ku soo xigta waxayna Sky Blues ku soo guulasytay laba koob oo Premier LEaque-ga ah halka Arsenal iyo Leicester City ay yihiin labada kooxood ee kale ee min hal jeer koobkan soo qaaday.
Haddii aan eegno tartamada Yurub Abramovich ayaa kooxdiisa Blues u horseeday in ay jabiso inkaartii Champoins Leaque-ga ee kooxaha waa wayn ee London iyada oo Arsenal kaga hormartay in ay dhegaha waa wayn qabto koobka xiisaha badan ee Champions Leaque-ga. Waana sabab wayn oo ay jamaahiirta Chelsea ku aamusiiyaan dhigooda Gunners.
Cheslsea ayaa waqtigan ku soo guulaystay laba koob oo Yurub ah oo kala ah Champions Leaque-ga iyo waliba Europa Leaque-ga waana kooxda kaliya ee England ah oo muddada uu Abramovich mulkiyada Chelsea hayay koobabkan ku soo guulaystay halka Manchester United iyo Liverpool ay min hal mar ku soo guulaysteen Champions Leaque-ga.
Haddii aan soo qaadanyo koobka Leaque Cupka ama Capital One Cupka loo yaqaan ay waxaa muddan afar jeer ku soo guulaystay Manchester United waana kooxda koobabka ugu badan ee Leaque Cupka ah soo hanatay waqtigan balse sidoo kale Chelsea ayaa ku soo guulaystay 3 koob waana kooxda labaad, Man City ayaa laba jeer soo qaaday Leaque Cupka waqtigab halka kooxaha Tottenham, Liverpool, Swansea City, Birmibgham City iyo Middlesbrough ay min jeer koobkan soo qaadeen.
Dhinaca FA Cupka markale Chelsea ayaa hogaaminaysa waxayna muddada aan ka soo hadlaynay ku soo guulaystay afar koob oo FA Cupka waliba waxay markii shanaad ku guulaysan karaan koobkan marka ay dhawaan Wembley Stadium kula ciyaaraan Arsenal oo ay finalka iskugu soo baxeen.
Man United ayaa markale iyaduna ah kooxda labaad waxayna soo hanatay saddex koob oo FA Cupka halka kooxaha Manchester City, Liverpool, Wigan iyo Portsmouth ay min mar waqtigan ku soo guulaysteen FA Cupka.
Waxay xogtani muujinaysaa sida ay uu mulkiile Abramovich uu Chelsea uga caawiyay in ay noqoto boqorada England iyo kooxda la wareegtay maamulka caasimada England ee London. Ma aha wax kaftan ama cid lagu xumaynayo balse waa xaqiiqo jirta isla markaana ay shabakada Gool24.net ugu talo gaashay in ay la wadaagto jamaahiirta faraxsan ee Chelsea isla markaana aanu xogtan ula wadaagno dadka jecel xaqiiqda kubbada cagta.
Wixii fikrad ah waxaad noogu soo gudbin kartaan qaybta hoose ee fariimaha Facebook, lana share garee asxaabta kale ee Facebook.
Sidee Ayey U Shaqeeyaan Askarta Ilaalisa Xajar Al-Aswadka Ku Yaalla Kacabada Barakaysan ?
Somaliland: “7 Hablood Oo Tahriibaya Waxa Qabsaday Qolo Madmadow, Cid Ka Soo Furfurtana waa la waayey oo waxay yidhahdeen, waanu isku Caddeynaynaa”
Somalia: Ra’iisal wasaare Kheyre oo gaaray deegaanka Balli-Doogle ee gobolka Shabeellaha hoose
Somaliland: Safaaradda Itoobiya Ku Taale Somaliland Oo Ka Hadashay Ajaanibka La Saarayo, Fiiseyaashii Hakaday Iyo Wax Wada Qabsiga Labada Dal
Maxaad Ka Taqaan 7da Maalqabeen Ee Ugu Hantida Badan Mulkiilayaasha Kooxaha Kubadda Cagta Adduunka?
“Kylian Mbappe waa uu u qalmaa ku guulaysga Ballon d’Or” – Eden Hazard